ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို ကြည့် လိုက်တာနဲ့အတွင်းသဘောနဲ့အဓိပ္ပာယ် ကို နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း များစွာက ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံ တွေအများကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီစက...
ချီးမွမ်းခြင်းက လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ ဘယ်လောက်အထိအရေးပါတယ်လို့ထင်မြင် ပါသလဲ။ သင်ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခု လည်းရှိမယ်၊ သင့်လက်အောက်မှာဝန် ထမ်းတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီဝန်ထမ်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲ...
သင်ကတစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ရ တာကိုနှစ်သက်တဲ့သူလား။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်း ချက်ပန်းတိုင်တွေကရောဘာတွေလဲ။ မိတ် ဆွေတွေဆီကအကူအညီမယူတတ်တဲ့ မာနမျိုးရှိနေသလား။ သင့်မိတ်ဆွေတွေက သင့်ကိုမကူညီနိုင်ဘူးလို့ခံစားမိသလား။သင့်...
အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်မှုက လူတစ်ယောက်အတွက် သိပ်ကိုအရေးအကြီးပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုမဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်လျှောက်လှမ်းမယ့်လမ်းက မဖြောင့် ဖြူးနိုင်ပါဘူး။ လိုရာပန်းတိုင်ကိုလည်း အ ရောက်မလှမ်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီအတ...
အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မပါတော့လျှင်၊ မပျော်ရွှင်တော့လျှင် အလုပ်ကထွက်ဖို့ စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှတော့အလုပ်ကို အကူးအပြောင်းလုပ်ချင် ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အထက်လူကြီးနဲ့အ ဆင်မပြေလို့၊ ကုမ္ပဏီရဲ့စည်းမျဉ်းစည်...
အဒ်ဝုဒ် ရိုက်သည့် ရုပ်ရှင်တွေကို စာရေးသူ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ကြည့်ဖြစ်သည်။ Bride of the Monster? Plan9from Outer Space ? Night of the Ghouls စသည်ဖြင့် မယုံနိုင်စရာ လက်ရာများ။ ဘယ်လိုမယုံနိုင်...
အခုတစ်လောဝေဖန်သံတွေကို ကြွက်ကြွက်ညံအောင်ကြားနေရတယ်။ လူပုဂ္ဂိလ်တွေအချင်းချင်းတစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဝေဖန်ကြတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဝေဖန်ကြတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေ တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ဝေဖန်ကြတယ်။ ဒါ့အ...
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း (၁၈)
ဉာဏ်တော်ကိုရွယ်၊ ပရိယာယ်(ဝါ)မဟာဗျူဟာ (Strategy) မဟာဗျူဟာ (Strategy)သည် ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက် လွန်စွာ အရေးပါလှသည်။ လူတစ်ယောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိက အဆုံးအဖြ...
အမေရိကန်မှာ အကျော်ကြားဆုံး တီဗီအစီအစဉ် တစ်ခု၏ အစခရီးသည် လုံးဝမထင်မှတ်ထားတာနှင့်စခဲ့သည်။ Fox ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းက သတင်းစာကာတွန်း ဆရာတစ်ယောက်ကို တီဗီကာတွန်း ဇာတ်လမ်းတွဲအစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်ပေးဖို့ ကမ်းလှ...
ကိုယ့်အပေါ်မနာလိုစိတ်ရှိတယ်လို့ ဘယ်အချက်တွေကြောင့် ပြောနိုင်သလဲ
မြန်မာစကားမှာ မုဒိတာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိပါတယ်။ သူတစ်ပါးကြီးပွားတိုးတက်တာကို ဝမ်းသာတဲ့ စိတ်ကို မုဒိတာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ လူတချို့က သူတစ်ပါးတိုးတက်အောင်မြင်နေပြီဆိုရင် မနာလိုဝန်တိုစိတ် ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူတစ်...